Ahoana no manova takelaka​(​d​)​[​hanova ny fango]
Afaka ovain'ny mpampiasa aterineto avy hatrany ny ankabiazan'ny pejy eto amin'ny wikipedia, ary io kosa ny foto-pandehanany. Azon'ny mpitsidika ovaina ny pejy raha hanatsara azy ny tena tanjony​​. Afaka ampiasaina ny Kianjam-pasika rehefa manandrana ny syntaxe wiki ; Azo ampiasaina ihany koa ny pejinao raha tianao.
Ovay ny lahatsoratra misy ao anatin'ilay pejy​[​hanova ny fango]
Hitanao eo ambon'ny toerana anoratana fa misy barre d'outils manamora ary mampahaingan'ny asa tsotra : Soratra matavy, Sora-mandry​, rohy lohateny sns.
HamakyHanovaHanova ny fangoHijery ny tantara
Hitsidika renipejyFandraisanaWikipedia findayPejy rehetraPejy vaovaoTakelaka kisendraToerana iraisanaToerana iombonanaNon-malagasy speakersFampidiranaFiovana faranyNy vaovaoHandefa takelakaFanomezanaKianjam-pasikaRenipejyFototra dimyFanamboarana takelakaPejy mirohy etoNovainaHandefa rakitraPejy manokanaRohy maharitraFampahalalana mikasika ny pejyHanorina bokyHampidina ho toa PDFNy votoatiny azo atonta printyAjouter des liens